नेप्सेमा लामो समयपछि आईपीओसहित चार कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत, कुनको कति ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > नेप्सेमा लामो समयपछि आईपीओसहित चार कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
नेप्सेमा लामो समयपछि आईपीओसहित चार कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । लामो समयपछि नेपालको धितोपत्र बजारमा शेयर थप भएको छ । बुधवार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० करोड कित्ता आईपीओसहित अन्य चार ओटा कम्पनीको बोनस शेयर गरि कुल ३५ करोड ६ लाख ९७ हजार ९८० दशमलव ५६ कित्ता शेयर सूचीकृत भएको हो ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) का अनुसार बुधवार एनएमबि बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, बुटवल पावर र जानकी फाइनान्स फाइनान्सको बोनस शेयरसमेत सूचीकृत भएको छ ।
एनएमबिको २१ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ६ प्रतिशत, बुटवल पावरको १० प्रतिशत र जानकी फाइनान्सको २२ प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । अब लगानीकर्ताले ती कम्पनीको सूचीकृत शेयरको कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
गत चैत १० गतेदेखि बजार बन्द भई वैशाखमा दुई दिन खुला भए पनि शेयर सूचीकृत भएको थिएन । बजार बन्द भए पनि शेयर सूचीकरण प्रक्रिया नेप्सेले नरोकेकाले ती कम्पनीहरुको शेयर सूचीकरण भएको हो । बजार सुचारु भएमा ती कम्पनीका शेयरधनीहरुले कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
२०७७ जेष्ठ २८ गते १६:३० मा प्रकाशित
थप २ सय ७९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ४ हजार ३६४ पुग्यो
मेयरले गरे खानेपानीमा भएको अनियमितताको यस्तो खुलासा ! यस्ता छन बागलुङ नगरको गतिविधि
दुईगुणा बढ्यो पर्यटक आगमन
अब गाउँगाउँमा वाइफाइ